Film Patrika » कहिलेसम्म नाइँ नभन्नू ल ?
२७ असार २०७५ |
कहिलेसम्म नाइँ नभन्नू ल ?
काठमाडाैं/ जब निर्देशक विकासराज अाचार्यले ‘निरान्जना’ फिल्म बनाउने भनेर घाेषणा गरे, उनका नजिकका साथीभाइहरू खुसी भए । खुसी किनभने अाचार्य पहिलाेपटक ‘नाइँ नभन्नू ल’काे शृंखलादेखि टाढिदै थिए । उनका धेरैजसाे साथीभाइ अझै पनि उनले नयाँ ब्रान्डकाे फिल्म बनाए हुन्थ्याे भन्ने चाहन्छन् ।
तर, उनले ‘निरान्जना’काे कथा ‘छक्कापन्जा ३’लार्इ दिए । त्यतिबेलै उनकाे ब्यानरमा ‘समर लभ’ फिल्म बन्ने समाचार छापिएकाे थियाे । त्याे पनि अर्कै ब्यानरमा बनिरहेकाे छ ।
धेरैकाे अनुमानविपरीत उनले फेरि ‘नाइँ नभन्नू ल’काे पाँचाैं शृंखला बनाएका छन् । फिल्म अागामी भदाै ८ गते रिलिज हुँदैछ । फिल्मकाे ट्रेलर मंगलबार सार्वजनिक भइसकेकाे छ ।
ट्रेलर हेर्दा अघिल्ला शृंखलाहरूभन्दा खासै भिन्न देखिँदैन फिल्म । फेमिली ड्रामा, राेनाधाेना र बालकलाकारहरूकाे ‘एडल्ट स्टाेरी’ले नै भरिएकाे महसुस हुन्छ याे शृंखला पनि ।
फिल्ममा केही कलाकारहरू फेरबदल भएका छन् । चाैथाे शृंखलाकी प्रियंका कार्की यथावत छिन् । मुख्य कलाकार अनुभव रेग्मी नहुने कुरै भएन । यसपालि स्वस्तिमा खड्का, दिलिप रायमाझी र निरूता सिंह थपिएका छन् । त्यस्तै अभिषेक नेपाल तथा सेड्रिना शर्माले डेब्यु गर्दैछन् ।
केही फिल्मप्रेमीले निर्देशक अचार्यकाे कार्यशैलीलार्इ अालाेचना गरेका छन् । ‘विकासराज अाचार्यले कहिलेसम्म नाइँ नभन्नू ल भनिरहने हाे, दिक्कै लाग्दाे’ भन्दै एक दर्शकले गत हप्ता फेसबुकमा लेखेका थिए । नयाँ फिल्म बनाउनुकाे सट्टा पाँचपटकसम्म नाइँ नभन्नू ल बनाउनु भनेकाे सिर्जनात्मकताकाे खडेरी हाे भन्ने खालका टिप्पणी उनीमात्र हाेइन अरूकाे पनि छ । निर्देशक अाचार्य भने यस्ता टिप्पणीलार्इ वास्ता गर्दैनन् ।
बरू ‘नाइँ नभन्नू ल ५’ले पनि अघिल्ला शृंखलाहरूले झैं दर्शककाे मन जित्ने उनकाे अाशा छ । उनी याे शृंखलालार्इ १० सम्म पुर्याउने याेजनामा छन् । तैपनि दर्शकले नयाँ शृंखलाहरूलार्इ कसरी लिनेछन्, त्यसमा पनि उनकाे याेजना निर्भर रहन्छ ।
सामीप्यराज तिमल्सिना र निर्देशक अाचार्य स्वयंले लेखेकाे ‘नाइँ नभन्नू ल ५’मा पुरूषाेत्तम प्रधानकाे छायांकन, वसन्त सापकाेटाकाे संगीत र अर्जुन जिसीकाे सम्पादन रहेकाे छ । फिल्मलार्इ हरिबाेल भण्डारी र गाैरीराज जाेशी मिलेर निर्माण गरेका हुन् ।
प्रकाशित मिति २७ असार २०७५, बुधबार ०५:०१